The Food Local Most Interesting Si Isku day In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > The Food Local Most Interesting Si Isku day In Europe
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo(Last Updated On: 24/02/2020)
Marka ay timaado in qaaradda sida dhaqan ahaan kala duwanaayeen sida Europe, aad soo duuduubo karaa dhaqanka gastronomic yihiin oo kaliya sida kala duwan! Haddii aad diyaar u tahay in ay hoos u doodid awoodaada oo dhan cayn kasta oo tahay oo xiiso leh (waxaana la isticmaalayo sifo in qoloyinka halkan) rakaab, markaas ka eegi kartaa liiska cuntada maxaliga ah ugu xiisaha badan our in ay isku dayaan in Europe iyo meesha aad ka heli – iyo laga yaabee qodaan tahay haddii aad dareen cajiib ah ama geesi.
The cuntada maxaliga ah ugu xiisaha badan in ay isku dayaan in Europe: Schwarzenauer
Fikradda ah cunto dhiig sameeyey naga dhigaysaa si degdeg ah u malaynayso of hadhuudhka Scottish dhaqanka ee Haggis. A daadi macaan ay kujirto xaaqida idaha (wadnaha, beerka, iyo sambabada); duqadda leh basal, oatmeal, xaydhii, uunsi, iyo cusbo, lagu qaso kayd, oo la kariyey iyadoo dhaqan ahaan lagu dhejiyay caloosha xayawaanka. Sidaas, fikradda ah maraq dhiig aan gaar u tahay Germany, laakiin Schwarzsauer, la dhadhan macaan, waa.
La dhigtay badan oo dhiig doofaar (ama daadi madow), giblets goose, iyo khal, iyo sidoo kale qorfe, toon ah, peppercorns, iyo dhir udgoon oo kale, qaas ahaan ka waqooyiga Germany waa walax ee qarow vegan.
Warka fiicani waxa weeye in mid ka mid ah baaquli oo kulul of Schwarzsauer daryeeli doona baahidaada protein aad inta ka hartay maalinta. Warka xumina waxa weeye in dhadhan xoog leh (iyo caraf udgoon) ma aha wax soo jiidanaya qof.
Tani waa saxan waxaad ka heli doontaa at suuqyada cuntada ee xaafaddaada ama dhaqanka maqaayado. Halkan ka mid ah cafe waxaan ka helay oo ay u adeegto, Cafe Black Sauer sidaa daraadeed waxa fiiri!
The cuntada maxaliga ah ugu xiisaha badan in ay isku dayaan in Europe: Filmjolk
Filmjolk sidoo kale loo yaqaan Fil, waa wax soo saarka caanaha dhaqameed si cajiib leh uga soo Sweden, iyo wax soo saarka caanaha caadiga ah dalalka nordigga gudahood. Waxaa la sameeyey by khamiirkii caanaha lo'da la noocyo kala duwan oo bakteeriyada ka lactis Lactococcus noocyada iyo mesenteroides Leuconostoc. Bakteeriyadu waxay metabolize lactose, sonkorta si dabiici ah laga helo caanaha, galay melkesyrebakterier taas oo macnaheedu yahay dadka lactose xejin waxaa ka wanaagsan yahay alaabooyinka kale ee caanaha laga dulqaadan karo. acid wuxuu ku siinayaa filmjolk dhadhan dhanaan iyo sababa borotiinada ee caanaha, inta badan casein, in adkaanta, sidaas dhagid wax soo saarka ugu dambeeya. Bakteeriyada waxaa kale oo uu soo saaro xaddi xaddidan ee diacetyl, Xarunta la dhadhan Subag a, taas oo ku siinayaa filmjolk dhadhan dabeecad.
Waxaan si buuxda ma iibin on this, laakiin waxaad ka codsaday cunto ugu xiiso maxaliga ah in ay isku dayaan in Europe, ma tastiest ah 😆
The cuntada maxaliga ah ugu xiisaha badan in ay isku dayaan in Europe: adhijir Hove
Marka aad ka fikirto Scandinavian a Christmas, cookies qorfe scrumptious iyo gravdlax laga yaabaa baxaan maan. Maxaa laga yaabaa in aadan of qabaa waa smalahove. (Naftiinna labo gool) madaxa A gubay oo la kariyey iyo wan yar ee kibirka oo meel qaadataa miiska cashada Christmas. Weheliyay baradho, baruurta iyo reer Sweden la shiiday. Ku alla kii nasiib ku filan in ay isku dayaan saxan this, ayaa Raalli ahaanshaha chowing hoos ku gelinno fattiest hore - indhaha, dhegaha, iyo af haddii waxa uu ka mid ahaa - ka hor inta Billadaha inta kale ee madaxa ka soo qaaddo. Waa ka - yuul!
The cuntada maxaliga ah ugu xiisaha badan in ay isku dayaan in Europe: Herring
Aynu soo afjaro this off on warqad adkaha, waxaana? Dadka intooda badan ka ogaato cookies subagga Danish (smakager), iyo liquorice (likorays), laakiin waxa ku saabsan cuntada kale iyo goodies?
Herring waa mid aad loo jecel yahay Denmark! Waxaa la iibin qaaciyay, curried, dhanaaniyey, ama sida Sol badan Gudhjem. Waa wax la jecel yahay gaar ahaan jasiiradda deenishka ah ee Bornholm. 'Qorraxda ka sarraysa Gudhjem'. Tarjumay sida qorraxdu ka badan Gudhjem ' – Magaalada on Bornholm. Waa gabal buttered oo kibis ah galley. Kaalinta la cunna, basasha cas, iyo ukunta. Kalluunka kale sida salmon, plaice, iyo kalluun la cuno dhaymo sida maraqa dhir iyo baradho.
Ma afkaaga waraabiyo cunto ugu xiiso maxaliga ah in ay isku dayaan in Europe? Ballansan tacaburka soo socda iyadoo la kaashanayo Save A tareenka !
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Finteresting-local-food-europe%2F- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#cuntada deegaanka europetravel Foodie trainjourney tareen safarka